के छ सिके राउतको जीवनीमा आधारित भएर बनेको चलचित्र ‘डा. सिके राउत द प्यासनमा’ || सुनौलो नेपाल
के छ सिके राउतको जीवनीमा आधारित भएर बनेको चलचित्र ‘डा. सिके राउत द प्यासनमा’
साउन २ काठमाडौँ स्वतन्त्र मधेस आन्दोलनका नाइके भनेर चिनिएका डा. सिके राउतको जीवनमा आधारित चलचित्र डा. सिके राउत को टिजर बुधबार सार्वजनिक भएको छ। राधिका इन्टरनेशलन मुभिज प्राइभेट लिमिटेडले डा. सिके राउत – द प्यासन नामको चलचित्र निर्माण गरेको हो।
छठमा प्रदर्शन गरिने भनिएको चलचित्रको छायांकन भदौँबाट सुरु हुँदैछ। बुधबार चलचित्र निर्माणको घोषणा सँगै चलचित्रको टिजर पनि सार्वजनिक गरिएको थियो।चलचित्र सन्तोष साहले लेखेका र निर्देशन गरेका छन्। चलचित्रमा राउतको भूमिकामा परदेशी शाह देखिने भएका छन्। उनले २५ भन्दा धेरै भोजपुरी चलचित्रमा काम गरिसेकेका छन्।
चलचित्र नेपाली भोजपुरी सँगै तीन भाषामा बन्नेछ चलचित्रको सब टाइटल पनि हुने बताएइएको छ। चलचित्रको बजेट डेढ करोड हुने अनुमान गरिएको छ। यो चलचित्रमा ५० प्रतिशत राउत र ५० प्रतिशत अन्य विषय समावेश हुने बताइएको छ। केक काटेर चलचित्र सुरु भएकाे घाेषणा गरिएकाे थियो। टिजर सार्वजनिक कार्यक्रममा पुगेका डा. सिके राउतले चलचित्रको बारेमा केही कुराकानी गरेका छन्। टिजर सार्वजनिक कार्यक्रममा राउत समर्थकको पनि बाक्लो उपस्थिती थियो। उनले बोलेको हरेक वाक्यपछि हलमा तालि गुञ्जिएको सुनिन्थयो।
डा. राउतले चलचित्रको बारेमा यस्तो बताएका छन्।
यो एउटा इतिहास बन्ने छ। यसमा केही विषयमा विवाद पनि हुन सक्ला। तर बुझ्न जरुरी छ फिल्म भनेको फिल्म नै हो। अहिले सम्म धेरै नेपालीहरुले मेरो जीवनी बुझेका छैनन्। प्रतिबन्धित भएको कारणले म मिडियामा पनि आउन पाएको हैन जनसम्पर्क पनि त्यति भएन। जहाँजहाँ राजनीतिक भाषण भयो त्यहाँ हस्तक्षेप भयो। भागदौडकै स्थिति भयो। त्यो अवस्थामा जनताले किन त्यस्तो भयो भनेर बुझ्ने अवसर पाउछन्।
किन मानिस यस्तो विद्रोहमा किन उत्रन्छ, कोही मान्छे किन आफ्नो ज्यान दिन तयार हुन्छ। कोही मान्छे किन आफ्नो सुख सुविधा, घर परिवार छोड्न तयार हुन्छ ? त्यो कुरा बुझ्न पनि यो चलचित्रले मद्दत गर्ला। समग्रमा एउटा राजनीतिक जीवन कस्तो हुन्छ एउटा विद्रोहीको जीवन कस्तो हुन्छ जतिखेर पनि भागदौडमा बित्छ भन्ने कुरा बुझ्न सजिलो हुन्छ भन्ने अपेक्षा लिएको छु।
धेरै धेरै धन्यवाद सबै आइदिनुभयो। यो चलचित्र बन्ने क्रममा डेढ महिना अगाडि म अमेरिकाबाट नेपाल फर्कने क्रममा विरगञ्जबाट कोही मानिसहरु तपाईलाई भेट्न आएका छन् चलचित्र बनाउने कुरा छ भनेका थिए त्यतिबेला मैले त्यति वास्ता गरिन।
म अक्सफोडमा लेक्चर दिन जानलाई तयारी गरिरहेको थिएँ उहाँहरुले म्यासेज पठाएको पठाइ गर्नुभयो। मैले फर्केपछि कुरा गरौला भनेको थिए। उहाँहरु कसरी भेट्ने भन्नेमा लागिराख्नु भयो। सिंहदरबार पछाडि मधेस मिडिया हाउसमा उहाँहरु कुरी राख्नुभएको रहेछ। त्यही बेला अभिनेता निर्माता बाबुसँग भेटियो। मैले वेवास्ता गर्नुको अर्को कारण के हो भने, यो भन्दा अगाडि दुई पल्ट दुई वर्ष अगाडि पनि मुम्बईबाट केही साथीले चलचित्र बनाउने प्रयास गरेका थिए तर त्यो सफल भएन। म घरबाट बाहिर जान नमिल्ने अवस्था थियो। त्यसैले काम रोकियो।
तर उहाँहरुको लगावले मैले नाई भन्न सकिन। प्रदेसी शाहले मसँग पात्रको अध्ययनको लागि १५ दिन बस्न पर्ने प्रस्ताव राख्नुभयो मैले हुन्छ भने। त्यो संवाद भएपछि एक साता भित्र जनकपुर गएर काम गरेर टिजर बनाएर आउनुभएछ। मैले त्यसपछि उहाँहरु गफमात्र गर्ने मान्छे हुनुहुने रहेछन भन्ने लाग्यो। मलाई उत्प्रेरणा भयो। मलाई सहयोग गर्न मन लाग्यो र यहाँ आएको छु।
दोस्रो भेटघाटमा उहाँहरुले मलाई भन्नुभयो, चलचित्र कमर्सियल हुन्छ एउटामात्र पक्ष हुँदैन। उहाँहरु एकदमै गम्भिर भएर एकदमै गल्ति होला की भनेर मलाई सोध्नुभयो के गर्ने ? मैले भने चलचित्र भनेको चलचित्र नै हो तपाईले कल्पनशीलता हाल्न सक्नु हुन्छ। उहाँहरुले भन्नुभयो यसो मसला त हाल्नु प र्‍यो सर केही लभ स्टोरी कलेज समयको भए भन्नुस न भन्नु भयो। अहिले चलचित्रको घोषणामा पनि महिलाको नाम गोप्य राखिएको छ। के छ मलाई थाहा छैन।
उहाँहरुले जीवनमा तपाई गीत गाउनुहुन्छ की नाई थाहा छैन तर हामी चलचित्रमा गीत चाँही राख्छौ भन्नु भएको छ। खैर चलचित्र चलचित्र नै हो। उपस्थित भएर सहयोग गरिदिनु हुने सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु।